भुइँमा सुत्नुका फाइदा, पढेपछि शायद ओछ्यानमा सुत्न छोड्नुहुनेछ
काठमाडौं — भुइँमा बस्न छोडेको कति वर्ष भयो ? बस्न र खाना खान पनि तपाईं कुर्सीकै प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन त ? अब भुइँमा सुत्नुभएको छ भनी प्रश्न सोध्दा तपाईं हाँस्नुहुन्छ होला ।
शरीरको क्षमताअनुसार भुइँमा सुत्न थाल्नुस् त । तपाईं कति आनन्दित महसूस गर्नुहुनेछ !
तौल बढेर समस्यामा हुनुहुन्छ ? खाने गर्नुस् भुटेको च...
अफिसमै यस्तो व्यायाम गरेर रहनुस् स्वस्थ
श्रीकृष्णकी भक्त अस्ट्रेलियाली महिला, पर्थमा बनाइन् वृ...
यसरी बनाउनुस् लौकाको बर्फी
विज्ञापन बोर्डको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन ६ संगठनको माग
सफारीमा गएका पर्यटकहरूलाई विशाल हात्तीले आक्रमण गरेपछि... (भिडियो)
मतपरिणाम अपडेट : ओली ८६६, रावल ९९